Samsung Galaxy A8s: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
Galaxy A8s: Samsung nke mbụ nwere igwefoto ngosi
Otu izu gara aga ụbọchị nkwupụta ya gosipụtara, na n'ikpeazụ taa Emeela Samsung Galaxy A8s. Ọ bụ ekwentị izizi nke akara Korea nwere igwefoto jikọtara na ihuenyo. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ ahụ na-achịkwa ụdị ndị ọzọ dị ka Huawei na Honor ndị gosipụtarala ngosi nke ngwaọrụ ha.
Ma protagonist oge a bụ Samsung ekwentị. Firmlọ ọrụ Korea ewepụtalarị Galaxy A8s a. Ekwentị nke ụlọ ọrụ ahụ na-azọrọ ịlaghachi asọmpi. Nkọwapụta dị mma, nhazi ọhụụ na nke ọhụụ, na-enweghị mgbagha, ọ nwere ihe niile iji nwee ọganiihu.
Ọ bụ ezie na ekpugherela ya ugbu a, enwere ụfọdụ nkọwapụta nke ngwaọrụ ahụ ejiri aka ekpe. Mana site na ozi anyi nwetara taa, anyi ghotara nke oma ihe anyị nwere ike ịtụ anya na Samsung Galaxy A8s a. Ekwentị nke Samsung na-atụ anya ịgbanwe ọfụma ya na ahịa na 2018.
1 Nkọwapụta Galaxy A8s
Nkọwapụta Galaxy A8s
Ngwaọrụ a rute mpaghara di elu n'etiti etiti, nke na-aga n'ihu na-eto ngwa ngwa n'ahịa mba ụwa. Ya mere Samsung batara n’ahịa a nke nwere ekwentị nwere ihe nile ibu otu n’ime ndi ewu ewu na ya. Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na Galaxy A8s a banyere usoro nkọwa? Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6,4-inch Super AMOLED na mkpebi 2340 x 1080 pikselụ na 19,5: 9 ruru
Ihe nhazi: Qualcomm Snapdragon 710 isi asatọ, yana 2 x Kyro 360 na 2.2 GHz na 6 x Kyro 360 na 1.7 GHz.
Ebe nchekwa RAM: 6 / 8 GB
Esịtidem nchekwa: 128GB (gbasaa ruo 512GB na kaadi microSD)
Kaadị esereseNwunye: 616
Igwefoto na-aga n'ihu: 24 MP + 10 MP + 5 MP nwere oghere f / 1.7 + f / 2.4 + f / 2.2 na LED Flash
Igwe n'ihu: 24 MP nwere oghere f / 2.0
Njikọ: Bluetooth 5.0, 4G / LTE, Dual SIM, WiFi 802.11a / b / g / n / ac, 3.5 mm jack, USB type-c connector
Ndị ọzọ: NFC na akara mkpisiaka na azụ
Usoro njikwa: Android 8.1 Oreo na Otu UI dị ka oyi akwa nhazi
Batrị: 3.400 mAh
Akụkụ: X x 158.4 74.9 7.4 mm
Ibu ibu: 173 grams
Samsung Galaxy A8s nwere ezigbo mmetụta na nkọwa. Ọ bụ a adịchaghị n'etiti-nso nke kasị zuru ezu. Ọ nwere ezigbo nhazi, kedu ka Snapdragon 710 si di, flagship na mpaghara ahịa a. Ọ na-abịa na njikọta abụọ nke RAM, mana na 128 GB nke nchekwa dị n'ime ya ka edobere. Yabụ ohere agaghị abụ nsogbu na ekwentị.
Ekwentị na-apụta ìhè karịsịa n'ọhịa nke foto. Ebe ọ bụ na azụ anyị hụrụ igwefoto atọ, na-eso usoro nke Galaxy A7 nke bụ nke mbụ n’ime ika ahụ nwere kamera atọ. O nwere ihe mmetụta 24 MP, ihe ntanetị anya MP nke 10 MP na ihe ntanetị nke atọ maka nha omimi nke 5 MP. Ya mere, a pụrụ iwere ụdị ihe oyiyi niile n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche site na ngwaọrụ ahụ. Na mgbakwunye inwe ọnụ ọgụgụ nke ọgụgụ isi na ya.
N'agbanyeghị nwere igwefoto nwere okpukpu atọ na azụ, ọ bụ igwefoto dị n'ihu nke Galaxy A8 a na-ewepụta ọtụtụ okwu. Ebe ọ bụ na ọ ghọrọ ụdị mbụ nke Samsung, na nke ahịa, ka emee igwefoto n'ime ihuenyo. Ọ bụ igwefoto MPN 24, wuru n'ime akụkụ aka nri nke ihuenyo ahụ. Ekele maka nke a, enwetara ihuenyo / ihu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100%.
Dị ka anyị nwere ike ịhụ na foto ahụ, Ọtụtụ agba na-echere anyị na Galaxy A8s a. Agba ndị enwetara ugbu a bụ acha anụnụ anụnụ, isi awọ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọ bụ ezie na anaghị achịkwa ya na enwere ọtụtụ agba na etiti a dị. E gosipụtara agba atọ ndị a maka ugbu a na China.
Onwebeghị ihe ekwuru gbasara mwepụta nke ekwentị ugbu a. Samsung chọrọ imesi obi ike ya dị ka ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ, mana ha ekwughị ụbọchị ma ọ bụ ahịa ndị a ga-eresị ekwentị ahụ. Nwere ike ịdenye aha na weebụ ịnata ozi gbasara ya. Ma n'oge ahụ ọ dịghị ihe a maara. E kwubeghị ọnụahịa nke Galaxy A8s a.
Ya mere, anyị ga-enwe echere kwa ụbọchị ole na ole ruo mgbe anyị ga-enweta ozi a. Ọ dị ka ị gaghị echere ogologo oge, yabụ anyị ga-ege ntị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Galaxy A8s: Samsung nke mbụ nwere igwefoto ngosi
Japan wepụrụ Huawei na ZTE site na ọrụ 5G maka ebumnuche nchekwa
Samsung Galaxy A7 (2018) na-aga site Geekbench na gam akporo achịcha